पुरुषलाई पनि ब्रेस्ट क्यान्सर ! - लोकसंवाद
पुरुषलाई पनि ब्रेस्ट क्यान्सर !
काठमाडौं । ब्रेस्ट क्यान्सर महिलाको आम समस्या हो । तर, भारतमा गरिएको एक अनुसन्धानले पुरुषमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर भएको देखाएको छ । यति मात्रै होइन, ठूलो संख्यामा पुरुषलाई ब्रेस्ट क्यान्सरको सम्भावना देखिएको छ ।
चन्डिगढस्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवम् अनुसन्धान संस्थानको अध्ययनबाट यस्तो खुलेको हो । पुरुषमा ब्रेस्ट क्यान्सर हुनुको मुख्य कारण हर्माेनमा असन्तुलन, मोटोपन, धूमपान तथा मद्यपान सेवन रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
पानीपतका सेक्टर–१८ निवासी एड्भोकेट अमित राठीले चन्डिगढस्थित अनुसन्धान संस्थानमा २०१५ देखि २०१९ सम्म भर्ना भएका क्यान्सर बिरामीको तथ्यांक लिएर यसको अध्ययन गरेका थिए ।
अन्तिम चरणमा हुन्छ पहिचान
प्रेम क्यान्सर हस्पिटलका रेडियसन अन्कोलाजिस्ट डा. अभिनव मुटनेजाका अनुसार महिला तथा पुरुष दुवैमा ब्रेस्टु टिस्यु हुन्छ । महिलामा धेरै प्रकारका हर्माेन भएकाले टिस्यु बढेर पूरै ब्रेस्टको रूप लिन्छ । तर, पुरुषमा ब्रेस्ट बढाउने हर्माेन हुँदैन ।
उनका अनुसार अधिकांश पुरुष छातीमा हुने गाँठको दुखाइलाई नजरअन्दाज गर्छन् । त्यही कारण छातीको क्यान्सर अन्तिम चरणमा मात्रै पहिचान हुन्छ । यो अवस्थामा बिरामीको ज्यान जाने खतरा हुन्छ ।
यो हो कारण
डा. मुटनेजाका अनुसार अधिकांश पटक रेडियसन टेस्ट, जेनेटिक कारण, मोटोपन, बढ्दो आयु, मद्यपान सेवन तथा हर्माेनमा गडबडीका कारण पुरुषमा छातीको क्यान्सर हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । आफूलाई चुस्त–दुरुस्त राखे र मद्यपान सेवन नगरे यसबाट जोगिन सकिन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार, पुरुषमा ब्रेस्ट फ्याट कम हुने भएका कारण उनीहरूमा ब्रेस्ट क्यान्सर चाँडै फैलिन्छ । यसबारे सुरुदेखि नै चासो नदिए बिरामीको ज्यान पनि जान सक्छ ।
महिलाको तुलनामा पुरुषको ब्रेस्ट क्यान्सरको सुरुवातको चरणमा पहिचान गर्न मुस्किल हुन्छ । किनकि पुरुषमा महिलाको जस्तै कुनै प्रकारको गाँठ हुँदैन । यससँगै गाँठ दुख्दैन ।
यो लक्षण देखिए हुनुस् सावधान
यदि पुरुषमा निप्पल वा आसपास क्षेत्रमा चिलायो भने त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर हुने लक्षण हुन सक्छ ।
यदि पुरुषको निप्पल क्षेत्रमा अप्ठेरो महसुस भयो अथवा त्यहाँ दबाउँदा दुखाई भयो भने ब्रेस्ट क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ।
पुरुषको निप्पलको आसपास क्षेत्रमा भएको घाउ उपचार गर्दा पनि सञ्चो भएन भने ब्रेस्ट क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ।
पुरुषको निप्पल तथा आसपासको क्षेत्रमा गाँठ भएको महसुस भए ब्रेस्ट क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ ।
यी लक्षण देखिए चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । यो समाचार जागरण डट कमबाट लिएका हौं ।